Unopfupisa sei 2020 uye unombundira 2021? - CHINA JWELL Machinery Co, Ltd.
Unopfupisa sei 2020 uye unombundira 2021?
Nguva: 2021-01-07 Hits:
Kune nzira dzakawanda dzekugamuchira Gore Idzva. Chiitiko chenguva refu chinomhanya chakarongwa naJwell chingave chakakosha.
Na8: 00 musi waNdira 1, 2021, vashandi vanobva kumafekitori akasiyana-siyana eJwell Company vakaita mudungwe zvakanaka pachivara. Jwell vanhu vakapfeka "China Dzvuku" uye "Vitality Bhuruu" zvipfeko zvakaunza kubata kwemavara akajeka kufekitori yechando. Nhasi, kudziya kwenzvimbo yega yega yefekitori kuri kubvisa 5 ℃. Nepo vanhu vazhinji vachiri kunakidzwa nekudziya kwemubhedha, vanhu veJwell vanotanga gore idzva nenzira yakasarudzika.
Zuva reGore Idzva kure-kure kumhanya, seyakajairwa mitambo yemitambo inodiwa nevashandi veJwell Kambani, yakabudirira kuitirwa zvikamu gumi neshanu kusvika parizvino. Iyo ine akasiyana siyana ezvekurudziro uye rave chiratidzo chebasa reJwell Kambani tsika yemakambani yekusiya kubva kune yekare uye kugamuchira iyo nyowani.
Mhanya nomugore idzva uye vhura iro ramangwana!
Kuchovha nekukurumidza uye kutanga rwendo rutsva!
"Kureba-kure uchimhanya kugwinya, kazhinji uchimhanya kuchengetedza moyo wakagwinya." Iyo yegumi neshanu-makore marefu anomhanya paZuva reGore Idzva yakaona kukura kwevanhu veJwell. Kukosha kwedaro refu rinomhanya paZuva reGore Idzva rakapfuura iro chiitiko chairo. Isu hatisi chete kutarisira kuti munhu wese achashandura iyo refu-refu kumhanya kuita "yakajairwa kumhanya", asi zvakare teerera kune yenguva dzose kurovedza muviri, uine hutano hutano uye wakawandisa simba. Mubasa remangwana nehupenyu, zvinonyatsoratidzawo mweya wevanhu veJwell mweya yakakwira uye ushingi.
Gore rega rega, tinokwazisa Gore Idzva nekumhanya; gore rega rega, isu tinogadzira kubwinya nekumhanya. Pazuva rekutanga ra2021, isu zvakare takamhanya kuburikidza neGore Idzva nemisoro yedu kumusoro uye takakwazisa mwenje wekutanga wegore idzva nekumhanya. Takakurira nechiedza chisina simba. Takaenderera kumberi tikatora mukana wekumhanya. Takapererwa nesitayera, uye tichavawo mune ramangwana. Mhedzisiro yakanaka mazuva ese!
Brand nyowani nharaunda, irikuvhurika hurongwa, inokura chishuwo, isingakundike!
Endai munzira yose uye kumhanya kupinda itsva goridhe zera!
Hapana nguva yechando isingakundike, uye hapana tsime risingazouye. Muna 2021, Jwell Machinery ichaunzawo nguva yegoridhe yekuvandudza. Kutarisana nemakwikwi anowedzera anotyisa emusika uye mamiriro emabhizimusi, vanhu veJwell vacharamba vachiomerera kumweya we "kushingirira uye kugona", kushanda pamwe chete uye kushanda pamwechete kuti vabudirire chinangwa chimwe chete, ramba uchimhanya, uye unomhanyisa munguva itsva yegoridhe!
Ticharamba tichive pamwe chete muna 2021, uye ticharamba tichishingirira uye tichida zveindasitiri iyi. Ngativandudzei uye simukai pamwechete uye tigoona zvishamiso zvitsva!
KUMASHURENguva yedenda, Jwell achienderera mberi nebasa revatengi
NEXTKutsigira wepasi rose "Anti-denda", CHINA JWELL yakasimba yakatanga PP Yanyungudika-yakaridzwa Nonwoven machira ekugadzira mutsara